Ọnọdụ nke na-ejikọ iwu
http://www.knwautobody.com welcome si njikọ a website [mere dị na okwu nke a na-ejikọ iwu].
[Nke a na-ejikọ iwu na-aduak inyere gị aka mgbe ejikọ a website.] MA Ọ BỤ [Site na iji nke a website ị na-ekweta-agbụ site usoro na ọnọdụ nke a ojiji iwu.]
Links na-atụ aka http://www.knwautobody.com ekwesịghị eduhie.
Kwesịrị ekwesị njikọ ederede ga-mgbe nile ga-eji.
[Site n'oge ruo n'oge anyị nwere ike imelite URL Ọdịdị nke anyị website, na gwụla ma anyị na-ekweta na-ede ma, ị na-ahụ maka emelite kwuru njikọ.] Ị gaghị eji anyị logo ejikọta a website (ma ọ bụ n'ụzọ) enweghị anyị awara awara dere ikike.
Ị na-agaghị na-ede ọdịnaya nke a website ma ọ bụ iji ihe ọ bụla yiri technology na mmekọrita ọdịnaya nke a website.
Links site na nke a website
Nke a na-agụnye website njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị ekesịpde na ejikwara site na otu nke atọ. Ndị a njikọ na-adịghị endorsements ma ọ bụ na-atụ aro.
http://www.knwautobody.com nwere dịghị achịkwa ọdịnaya nke ọzọ weebụsaịtị, na http://www.knwautobody.com-anabata ibu ọrụ ọ bụla maka ha ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke ahụ nwere ike ibili si ojiji nke ha.
Mwepụ nke njikọ
Ị kweere na, anyị kwesịrị rịọ nhichapụ nke a njikọ http://www.knwautobody.com na bụ n'ime gị akara, ị ga-ihichapụ njikọ n'egbughị oge.
Ọ bụrụ na ị ga-amasị anyị ka anyị wepụ a njikọ gị website na-gụnyere na http://www.knwautobody.com, biko kpọtụrụ anyị site na iji na kọntaktị nkọwa n'okpuru. Rịba ama na ọ gwụla ma ị nwere egal ikike ịchọ mwepụ, dị otú ahụ na mwepụ ga-abụ na anyị uche.]
Mgbanwe a na-ejikọ iwu
Anyị nwere ike megharịa a na-ejikọ iwu n'oge ọ bụla site n'ibipụta otu ọhụrụ version na nke a
Kwesịrị na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a na-ejikọ iwu, biko kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa setịpụrụ n'okpuru: